Microsoft yave kuda kushandura ese Outlook yevashandisi veMac kune iyo itsva Outlook chiitiko
Kudzoka kuIgnite 2019, Microsoft yakazivisa-nyowani Outlook yeMac ruzivo neUI yakagadziridzwa, yakagadziridzwa mashandiro uye akati wandei maficha. Iyi Outlook nyowani yeMac inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft sync iyo inotopa simba Outlook yeIOS uye Android uye Windows Mail app. Iyo Microsoft sync tekinoroji inopa nekukurumidza uye yakavimbika kuwiriranisa ruzivo, yakagadziridzwa mibairo yekutsvaga, yakaderedzwa email kuremerwa nguva, uye inogonesa Outlook yeMac timu kuunza mamwe Office 365 maficha zviri nyore.
Microsoft yanga ichiyedza iyo Outlook nyowani yeMac ine Insiders muBeta uye Preview chiteshi, uye nhasi Microsoft yakazivisa kuti iyo Outlook itsva yeMac ichave yakasarudzika chiitiko cheChazvino chiteshi, kureva vashandisi venguva dzose.
Shanduko huru mune iyi nyowani Outlook yeMac chiitiko ndiyo itsva toolbar pamusoro. Microsoft yakatsiva ribhoni neturusi nyowani inogoneka. Microsoft inonzwa kuti iyi bhari nyowani inobatsira kudzikisa yako yekuona clutter uye inokubatsira kutarisa pane zvakanyanya kukosha.
Nekuwedzerwa kwe Online Archive, Akagovaniswa Mabhokisi Emeyili, Akagovaniswa Makarenda, uye Delegation, Microsoft inonzwa iyo nyowani app iri ficha-yakakwana zvakakwana kutsiva yekare Outlook chiitiko.
Vashandisi veOutlook Mac vangangove vasina kumboshandisa Nyowani Outlook kana kuti vakaedza Nyowani Outlook uye vakadzokera kuLegacy Outlook vanochinjirwa kumutengi mutsva. Vacharamba zvakadaro vachikwanisa kudzokera kuchiitiko chekare.
Microsoft ichatanga kuburitsa kuburitswa uku 16.58 pakati paKukadzi uye inotarisira kupedzisa kuburitswa mukupera kwaFebruary.
MacBook haibatike? Heino nzira yekugadzirisa nayo